Bartlett na-akparịta ụka na ụgbọ elu Emirates iji webata ụgbọ elu pụrụ iche na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Bartlett na-akparịta ụka na ụgbọ elu Emirates iji webata ụgbọ elu pụrụ iche na Jamaica
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (n'aka nri) na-ekele Emirates Airlines 'Senior VP Commercial Operations - Americas, Salem Obaidalla, na-eso nzukọ na-arụpụta ihe na ụlọ ọrụ Dubai's Dubai. N'oge nzukọ ahụ, nke mere na October 24, ha tụlere ohere nke iwebata ọrụ pụrụ iche n'etiti Dubai na Jamaica, na ememe Jamaica Day na Dubai Expo 2020, na-eme na February 2022.
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ekpughere na ya ebidola mkparịta ụka ya na ndị nnọchi anya ụgbọ elu Emirates, na ebumnuche iwebata ụgbọ elu pụrụ iche n'etiti Dubai na Jamaica n'isi afọ na-abịa. Nkwuputa a na-abịa dị ka Minista kwubiri ọrụ ahịa na United Arab Emirates (UAE) ụnyaahụ, ya na nzukọ dị mkpa ya na ndị isi ọrụ nke Emirates Airlines na isi ụlọ ọrụ Dubai.
Ihe pụtara ìhè na mkparịta ụka ahụ bụ ohere nke iwebata ọrụ pụrụ iche n'etiti Dubai na Jamaica, n'ememme Jamaica Day na Expo 2020, Dubai na February 2022.
Enwekwara mkparịta ụka na-arụpụta ihe gbasara njem nlegharị anya na mgbake ụgbọ elu.
A na-atụ anya mkparịta ụka ndị ọzọ iji mee ka njikọ aka zuru oke nke Emirates na ndị mmekọ ndị ọzọ na Middle East.
Otu isi ihe dị na mkparịta ụka sara mbara bụ ohere nke iwebata ọrụ pụrụ iche n'etiti Dubai na Jamaica, n'ememe nke Jamaica Day na Expo 2020, Dubai na February 2022. "Anyị kwetara inyocha ohere nke ịhazi ụgbọ elu a, nkọwa nke a ga-arụ ọrụ ozugbo enwere ike. Enwekwara mkparịta ụka na-arụpụta ihe gbasara njem nlegharị anya na atụmanya mgbake ụgbọ elu yana ezigbo ụdị V nke Jamaica na Dubai na-enweta," Bartlett kwuru.
Ọ na-atụ anya nkwurịta okwu n'ihu n'ọnọdụ nke atụmatụ ọtụtụ ebe a na-emepụta na ugwu Caribbean iji mee ka njikọ aka zuru oke nke Emirates na ndị mmekọ ndị ọzọ na Middle East. Emirates bụ ụgbọ elu kachasị na UAE, yana Middle East n'ozuzu, na-arụ ọrụ karịa ụgbọ elu 3,600 kwa izu.
Mgbe ha nọ na UAE, Minista Bartlett na ndị otu ya zutere ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke obodo iji kparịta mmekorita na ntinye ego nlegharị anya site na mpaghara; Atụmatụ njem nlegharị anya Middle East; na ụzọ ụzọ maka North Africa na Asia na ikwado nke ụgbọ elu. Enwekwara nzukọ ya na ndị isi nke EMAAR, nke a na-ekwu na ọ bụ onye ọbịa kacha ukwuu na nke kachasị ewu ewu na Real Estate/Community Development na Middle East; DP World, otu n'ime nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri; DNATA, otu onye ọrụ njem nlegharị anya kachasị na UAE na TRACT, onye na-ahụ maka njem nlegharị anya na India.
"Oge ahịa ahịa nke mụ na ndị otu m nwere na ndị isi njem nlegharị anya na ndị mmekọ ngwa agha na UAE, na-amị mkpụrụ. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a ga-ebute usoro nke ichekwa itinye ego ọhụrụ, ahịa na ọnụ ụzọ si Middle East, Asia / Asia Minor na Africa gaa Jamaica na ndị ọzọ Caribbean, "Minista Bartlett kọwara.
Site na UAE, Minista Bartlett ga-aga Riyadh, Saudi Arabia, ebe ọ ga-ekwu okwu na 5th mbipụta nke Future Investment Initiative (FII). FII nke afọ a ga-agụnye mkparịta ụka miri emi gbasara ohere itinye ego zuru ụwa ọnụ ọhụrụ, nyocha nke usoro ụlọ ọrụ, na ịkparịta ụka n'enweghị atụ n'etiti ndị isi, ndị isi ụwa, na ndị ọkachamara.
Ọ ga-esonyere ya na Senator, Hon. Aubyn Hill na ikike ya dị ka Minista na-enweghị Pọtụfoliyo na Ministry of Economic Growth and Job Creation (MEGJC), na-ahụ maka mmiri, Ala, Business Process Outsourcing (BPOs), Special Economic Zone Authority of Jamaica na ọrụ pụrụ iche.